काठमाडौँ उपत्यकामा १५ दिनको लागि ‘सटडाउन’ लागू गरिँदै,के हुन्छ सट डाउनमा ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँ उपत्यकामा १५ दिनको लागि ‘सटडाउन’ लागू गरिँदै,के हुन्छ सट डाउनमा ?
यति बेला नेपालमा कोरोनाको कहर बढेको छ। पछिल्लो अवस्थामा अनियन्त्रित रुपमा संक्रमित थपिने र मृतकको संख्या पनि बढ्दै गएपछि फेरी नेपालमा सट डाउन हुने सम्भावना बढेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि उपत्यकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दुई हप्ताको लागि ‘सटडाउन’ हुने भएको छ । मानवीय गतिविधि र आवतजावतमा थप कडाइ हुने भक्तपुरकी सिडिओ हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन् । तर तत्काल लकडाउन भने नहुने उनको भनाइ छ । लक डाउन र सट डाउन फरक कुरा हुन्।
सिडिओ पाण्डेले ‘सटडाउन’ अवधिभरमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट हुने केही विशेष कामबाहेकका सेवा बन्द हुने बताइन् । अन्य सरकारी कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने तय गरेको पाण्डेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बैठकमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग नगर्ने तथा सुरक्षा सावधानी नअपनाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने तथा सवारी साधनमा लागू गरिएको जोरबिजोर प्रणालीलाई कडाईका साथ पालना गराउने पनि निर्णय भएको छ ।’ देश अब तत्काल नै पूर्ण रुपले लक् डाउनमा नगए पनि सट डाउन मार्फत अहिलेलाई सक्दो कडाइ गर्ने पनि उनले बताइन।
श्रीमानको निधन भै एक्लै घरमा बसेकी महिलाको ह/त्या